Ny IISS (Institut International des Sciences Sociales) eny Tsimbazaza no manome fiofanana sy tantsoroka ho an’ireo tanora. Miasa andro aman’alina ny 54 ora ireo tanora ao anatin’ny Startup week-end global covid-19 hifaninana amin’ireo tanora maneran-tany. Araka ny fanazava-dRandriantsiferana Arimalala Diamondra mpampiofana eo anivon’ny IISS, dia tetikasa mba tena azo tanterahana, ary asa manokana vao foronina mihitsy no atolotra. Ohatra misy amin’ireo mpifaninana ny hoe mpahay informatika manokatra “application” momba ny fahasalamana. Misy ny mpampianatra izay mamorona “application” momba ny fanabeazana sy fanentanana ara-pahasalamana, izay tena ilaina be amin’izao covid-19 izao. Amin’ny alalan’ny tranonkala ny fifaninana, ka 10 sangany no hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fampisehoana virtoaly ny takarivan’ny 26 aprily.